Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xiisadda galmada ee aan la xallin | Ragga Stylish
Xaqiiqdii mararka qaarkood noloshaada waxaad dooneysay inaad qof la joogto oo aad galmo la yeelatid asaga ama iyada dareenkuna wuxuu ahaa mid isweydaarsi ah. Si kastaba ha noqotee, ama duruufo dibadeed awgood ama yeelashada lamaane ama asxaab ujeedooyin kale leh, waad awoodi kari weyday inaad ku dhammaysato rabitaankaaga ama qofka kale. Tani waa waxa loogu yeero xiisad galmo oo aan xal loo helin. Waxay ku saabsan tahay rabitaanka labada qof ee kan kale iyo in marna kiisku yahay in la fuliyo.
Maqaalkan waxaan si fiican ugu sharxi doonnaa waxa xiisaddan galmada ee aan la xallin ay tahay iyo haddii lagu talinayo in la xalliyo iyo in kale. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Sii wad akhriska.
1 Waa maxay xiisadda galmada ee aan la xallin
2 Sida loo aqoonsado xiisad galmo oo aan xal loo helin
3 Maxaa ka dhigaya TSNR mid jira?
4 Miyay tahay in xiisadda galmada ee aan la xallin la xalliyo?
Waa maxay xiisadda galmada ee aan la xallin
Xaqiiqda inaad dareento rabitaan galmo ee qof kale kaaama dhigeyso inaad yeelato xiisad galmo. Qof kastaa wuxuu jeclaan karaa inuu la seexdo sariirta qof kale oo ay u arkaan inuu yahay mid soo jiidasho leh ama uu ku jiito. Si kastaba ha noqotee, kacsanaanta galmada waxay dhacdaa marka dareenku ku dhaco labada qofba. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa jiritaanka rabitaan jinsi oo loo qabo qofka kale iyo in, duruufo jira oo aan mid walba gacanta ugu jirin awgood, aan la xallin karin.
Markaan isku aragno xaaladahan, waa iska caadi in kun iyo kow shaki ka kaco waxa aan sameyno. Inaad yeelato qof kale oo doonaya inuu kula galmoodo adiga iyo adiguba laakiin laakiin ma sameynaysid wax xasillooni leh oo mararka qaarkood xanaaqsan. Muddo intee le'eg ayaad rabtaa inaad ila galmooto? Waa mid ka mid ah su'aalaha aan isweydiineyno markaan ka baqeyno inaan lumino soo jiidashadaas qofka kale.
Su'aal kale oo soo baxda taasna, malaha, in ka badan hal ayaa dib u tuuray markii go'aanka la gaarayo, maxaa dhacaya haddii aan jebiyo sixirka soo jiidashada aniga oo xallinaya xiisadda galmada? Waana laga yaabaa in qofka aan soo jiidanay ma noqon karto wixii aan fileynay. Marar badan, male-awaalku wuxuu ciyaari karaa tabaha. Taasi waa markaan bilaabi doonno inaan ka fikirno dhammaan jagooyinka aan kula qaban karno qofka kale sariirta iyo sida wanaagsan ee galmada ay adiga kula sameyn laheyd. Si kastaba ha noqotee, waad niyad jabi kartaa marka riixitaanku yimaado.
Sida loo aqoonsado xiisad galmo oo aan xal loo helin
Kahor ogaanshaha haddii aan dhab ahaantii leenahay xiisad galmo oo aan la xallin (TSNR), waa inaan si fiican u ogaanno sida loo qabsado calaamadaha uu qofka kale na siinayo. Waxaan xusuusan nahay xiisaddan laguma xallin karo sabab kastoo jirta. Taasi waa, xiisadda noocan ah waxay badanaa ku dhacdaa dadka leh lammaane ama saaxiibbo iyo xitaa wada-shaqeyn. Xitaa haddii aad leedahay lammaane, waa lama huraan inaad eegto dadka kale si aad u qiyaastid waxa ay noqon doonto galmo lala sameeyo iyaga. Tani kaaama dhigeyso inaad xiisad galmo la yeelato qof walba, laakiin waa inuu noqdaa wax is-weydaarsi.
Si loo awoodo in la aqoonsado xaqiiqadan, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo ogaado sida loo qabsado calaamadaha. Waxa ugu horeeya ayaa ah, marka aan aragno qofka kale, waxaan dareemeynaa calool xanuun. Waa dareen la mid ah kan aad leedahay markii aad jacaylka qabtid. Tani waa sababta dad badani u jahwareeriyaan dareenka oo aakhirka ay u nijaaseeyaan oo ay ugu dambeyn la noqdaan lamaanahooda. Mar alla markii ay dhammaystirto rabitaankaas galmada, waxay ku dambaynaysaa inay ka shallaato maxaa yeelay jacayl ma aysan qabin, laakiin waxay lahayd TSNR.
Waa wax caadi ah in neefsashadeenu ay xawaareyso marka aan qofkaas kale ag joogno oo xitaa casaan baan noqonnaa markaan la hadlayno. Waa wax iska caadi ah, maskaxdaada nooc kasta oo male-awaal ah oo fisqi ah ayaa socda oo ku saabsan waxa aad ku sameyn lahayd isaga oo sariirta ku jiifa. Laakiin waa macquul in waxa aad u malaynaysaa aysan waligood dhici doonin.
Si loo ogaado haddii qofka kale uu leeyahay dareenkaaga oo kale, calaamadaha waa in lagu falanqeeyaa heerka habdhaqanka. Tusaale ahaan, waa macquul inaad argagaxdo markaad wada joogtid ama aad sameysid dabeecado aan qasab aheyn sida inaad midba midka kale kajeedo, taabashada timahaaga markaad isku dhowdahay ama sameyso weedho labo ujeedo leh
Maxaa ka dhigaya TSNR mid jira?
Kaliya ma arki doonno waxa ka dhigaya xiisaddan galmada, laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa inaan aragno waxa ay tahay waxa ku sii socda. Marka horeba waa rabitaan. Markaan qof rabitaan ka leenahay, waa iska caadi inaan rabno inaan galmo la galno. Si kastaba ha noqotee, waxaan mar labaad adkeyneynaa inay jiraan dad badan oo si xun ugu dhammaaday lamaanahooda iyagoo u maleynaya in waxa ay u dareemeen qofkaas kale uu ahaa jacayl ee uusan aheyn rabitaan. Waxyaabaha waa inay qaali noqdaan.
Jebinta "qaanuunka". Ahaanshaha ragga xun mararka qaarkood aad bay u cunteeyaan. Waa khalad in la khiyaaneeyo kalsoonida lamaanaha oo wax loo yeelo, laakiin ficilkaas "kacdoon" ee ah inaan rabno inaan ogaanno sida uu yahay qofka sariirta sariirta waxay noo horseedaysaa inaan isku dayno oo aan khaladaad sameyno.
Marka aan ka helno jawaab celin qofka kale waxaan dooneynaa inaan sii wadno sii kobcinta hamigaas ah ogaanshaha in qof na raadinayo. Kicinta ka dib, "nacasnimada hareeraha," weedhaha laba-maskaxda leh, iyo kicinta maskaxeed ee joogtada ah, xiisadda galmada ee aan la xallin ayaa sii wadata quudinta muddo dheer.
Sida xaqiiqda xiisaha leh, waxaan dhihi karnaa taas meesha ay ugu badan tahay TSNR ayaa ku taal shaqada. Tani waa sababta oo ah dadku waa inay ku muujiyaan waji ka culus oo mas'uuliyad leh shaqadooda iyo marar badan oo leh lebis iyo wax walba. Xaqiiqadani waxay ka dhigeysaa inay rabaan inay ka gudbaan sharciga oo ay ka boodaan dhammaan caqabadaha si ay "u caddeeyaan" qofkaasi wuxuu noqon lahaa meel ka baxsan shaqadiisa. Taasi waa, xaaladda dhabta ah.
Miyay tahay in xiisadda galmada ee aan la xallin la xalliyo?
Waxaad isweydiin kartaa su’aashan marar badan. Si kastaba ha noqotee, haddii tan TSRN ay dhacdo waa sababta oo ah waxaa jira sababo aan loo xallin karin. Haddii sababtani tahay sababta oo ah waxaad leedahay lammaane, ka fikir laba jeer oo hore oo naftaada geli booska lammaanahaaga. Ka fikir inay iyadu adiga kugu samaynayso. Ma jeceshahay Ma u dulqaadan doontaa? Waxaa muhiim ah in maskaxdaada laga nadiifiyo, tan awgeed, waxaa ugu wanaagsan inaad siigeysato ka fikirida qofkaas aadka kuu soo jiita. Mala awaalkaagu ha duulo oo maskaxdaada ku dhammee TSNR. Sidan qofna kuma dhaawici doontid.
Markaad tan sameysid, ma jebin doontid waxyaabaha aad ka filaysay qofkaas. Sidii aan horey u soo sheegnayba, waxaa suuragal ah in, markii riixintu timaado in la tuuro, qofkaasi uu kugu hungoobo sariirta oo sixirku ku jabo. Xaqiiqdii male-awaalkaaga wax badan ayaad uga bixi doontaa xaaladda.
Haddii dhanka kale aad rabto inaad qatar u gasho xalinteeda Waa inaad ka fikirto inay saameyn ku yeelanayso shaqada, xiriirkaaga ama xiriirkaaga laftiisa.
Waxaan rajeynayaa in tilmaamahan aad ku aqoonsan karto TSNR-kaaga oo aad si fiican u dooran kartid waxaad sameyn doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Xiisad galmo oo aan la xallin
80s qaabka skater